CNC mihodina Center, Machine CNC Lathe, mpamatsy & mpanamboatra China
Eto ianao: an-trano1 / CNC mihodina Center, Machine CNC Lathe, mpamatsy & mpanamboatra C ...
FIVORIAMBE MAFY MULTI AXIS CENTRE FIVORIANA CNC
Tsinfa dia mpamatsy matihanina & mpanamboatra milina fanodinana CNC any Shina. Ny foiben'ny fihodinan'ny CNC dia manana asa feno, kalitao avo lenta ary haingam-pandeha. Ampiasaina indrindra amin'ny fikarakarana ireo faritra rotary, amin'ny ankapobeny dia afaka mamita tampoka ny vatan'ny vatan-tsolika, ny tampon'ny kônika, ny faritra boribory, ny fandavahana, ny fikosoham-bary ary ny fanodinana ny kofehy, ary koa afaka manodina faritra mihodina sarotra, toy ny hyperboloid. Ny axis marobe dia azo ampiana arakaraka ny tinady: latte axis c, lathe 3 axis, 2 axis lathe, 5 axis CNC lathe, 4 axis CNC lathe.
Fahombiazana avo lenta: Ao amin'ny foiben'ny fihodinan'ny CNC, aorian'ny fametahana ny workpiece indray mandeha, dia afaka mameno ny ampahany mihodina, ny fikosoham-bary, ny fandavahana, ny savily, ny fanodinana kofehy ary ny fomba fanodinana hafa.
Hentitra henjana: Tsaboina manokana ny fandriana hamoahana ny adin-tsaina anatiny.
Miorina tsara: Mampiasa mivantana ny maotera servo ny lathe CNC mba hahatsapany ny hetsika famahanana amin'ny alàlan'ny takelaka fitorahana visy baolina sy fitsaharana fitaovana, noho izany dia notsorina be ny rafitry ny rafitra fahana.
Fanontaniana? sa mila vidiny?Antsoy izahay amin'ny + 86-15318444939, ary miresaha amin'ny iray amin'ireo solontenanay manam-pahaizana.Azonao atao koa ny mameno ny: contact form.
Masinina mihodina mihodina CNC amidy:
Masinina mihodina TFA40 CNC
Rotary savaivony 400mm, 30/45 diplaoma mitongilana fandriana, mety famafana fanesorana, henjana henjana
TFA40-S CNC mihodina afovoany 3 axis
Tilikambo fanapahana 8 station, fikosoham-bary, fandavahana, fihodinana, azo zahana, fandaharana CNC
TFA40B rendrika fandriana CNC lathe 2 axis
Ny savaivony rotary dia 400mm, ny halavan'ny fanodinana dia 500-1000mm, ary ny masinina fanesorana puce dia azo ampiasaina amin'ny fanesorana puce automatique.
TFA-8S CNC mihodina afovoany 4 axis
Tilikambo fanodinana 8 fiantsonana, lohany herinaratra efatra zoro, lohany herinaratra efatra 0 zoro
Ivotoerana fihodinana TFA50 CNC
LTK andian-dahatsoratra fisaka fandriana milina lathe CNC
vidiny mora, savaivony 360-16000mm, halavan'ny masinina 500-5000mm,
Horonan-tsarimihetsika milina fanodinana CNC:
Afaka manamboatra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izahay, mifandraisa aminay ho an'ny vahaolana sy ny teny nindramina
Tombony amin'ny milina fihodinan'ny CNC:
Haavo avo lenta amin'ny automatisation: Rafitra CNC ho an'ny fifehezana, araky ny teknolojia fanodinana ho an'ny programa, dingana maro no vita indray mandeha. Izy io dia azo ampiarahina amin'ny chuck hydraulic, seza rambo hidrolika ary sandry robot ho an'ny fanodinana mandeha ho azy sy famoahana entana, izay mamonjy ny asa ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
Fanesorana puce mora azo: ny fandriana tsy azo ihodivirana, ny chip vy dia latsaka ao anaty boaty fanangonana chip, azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanesorana puce conveyor chainplate.
Fiarovana tsara: fiarovana voaaro tanteraka no raisina.
Haingam-pandeha: Haingam-pandeha misy valiny Spindle dia misy amin'ny 1600 ka hatramin'ny 4500 Rpm
Inona ny foibe fihodinana cnc?
Ny lathes CNC ara-toekarena mahazatra dia manana famaky roa, X sy Z. Ny foibe fihodinana dia manana famaky maro, famaky 3, famaky 4, famaky 5, sns. Ankoatry ny fiasan'ny fihodina sy ny fikosoham-bary, dia manana ny fiasan'ny fahombiazana avo lenta izy io. Mihena ny fotoana sy ny fotoana fametahana.
Raha fintinina, ny foiben'ny fihodinan'ny CNC dia manana ireto toetra manaraka ireto:
(1) Fifanarahana matanjaka, mety amin'ny fanodinana ireo faritra marobe sy karazany kely.
Ao amin'ny fanodinana automatique nentim-paharazana na semi-automatique ampahany vaovao, amin'ny ankapobeny dia mila manamboatra ny fitaovana milina na kojakoja momba ny milina, mba hahamora ny fampiasana azy.
Ny fitaovan'ny milina dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fizarana, raha mampiasa ny lathe CNC mba hanodinana ampahany amin'ny endrika samihafa, mila mamerina manamboatra na manova ny fizotran'ny famolavolana fotsiny izy.
Ny programa (rindrambaiko) dia afaka mamaly haingana ny fepetra takiana amin'ny fikarakarana ary mampihena be ny fotoana fiomanana ara-teknika amin'ny fanoloana ny fitaovan'ny milina
Mety amin'ny fanodinana maro karazana, singa tokana na fanodinana kely.
(2) Fahamarinana avo lenta ary mifanaraka tsara
Noho ny fampidirana ireo haitao avo lenta sy vaovao toy ny masinina sy herinaratra, ny maha-marina ny milina fitaovan'ny milina CNC dia mazàna avo noho ny an'ny milina mahazatra. Fampivoarana ny fitaovana milina CNC.
Ny fizotry ny milina dia fehezin'ny solosaina araka ny programa fampidirana mialoha, izay misoroka ny haavon'ny teknikan'ny mpandraharaha.
Ny fahasamihafana eo amin'ny kalitaon'ny vokatra ateraky ny fahasamihafana. Ho an'ny sangan'asa sasany misy endrika sarotra, dia saika tsy vita mihitsy ny famitan'ny fitaovana milina tsotra azy ireo.
Saingy ny fitaovan'ny milina CNC dia tsy manangona afa-tsy ilay programa sarotra kokoa azo tanterahina mba hahatratrarana ny tanjona, raha ilaina dia mety hampiasa ilay programa ampiasana solosaina na ilay solosaina koa hikajiana
Fanodinana fanampiana amin'ny solosaina. Ho fanampin'izany, ny fizotran'ny famahanana ny milina CNC dia tsy misy fiatraikany amin'ny fiovana ara-batana sy ara-pihetseham-po an'ny mpandraharaha.
(3) Manana famokarana avo kokoa sy vidin'ny fikarakarana ambany izy io
Ny famokarana fitaovan'ny milina dia manondro ny fotoana ilaina amin'ny fikarakarana ampahany, ao anatin'izany ny fotoanan'ny maneuver sy ny fotoana fanampiana. isa
Ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandehan'ilay lathe dia azo fehezina amin'ny sakany maro, ary ny lalàna mifehy ny hafainganam-pandeha dia azo raisina. Ny hafainganam-pandeha fanapahana tsara indrindra dia azo alaina mandritra ny milina.
Mba hanatsarana ny masontsivana fanapahana dia mihatsara tanteraka ny famokarana,
Mihena ny vidin'ny fanodinana, indrindra ho an'ireo ampahany amin'ny famokarana betsaka, arakaraky ny haben'ny andiany no mampihena ny vidin'ny fikarakarana.
Ho an'ny famokarana betsaka, indrindra ny famokarana betsaka, ny fahombiazan'ny fanodinana ary ny fahombiazany dia tokony hohamafisina amin'ny fiantohana ny kalitaon'ny fanodinana
Ny fahamendrehan'ny fizotrany, ny haitao fikirakirany ary ny andiany kely dia tsy mitovy. Ohatra, ny fisafidianana kofehy, ny fanamboarana ny làlan'ny fitaovana ary ny fandaminana fitaovana
Ny toerana sy ny filaharan'ny fampiasana dia tokony hodinihina tsara, ary ny atiny mifandraika dia hampidirina amin'ny fizarana manaraka.
Ny mifanohitra amin'ny famokarana betsaka dia ny famokarana tokana. Ny endrika manandanja indrindra amin'ny famokarana tokana dia ny fiantohana ny taha taha voalohany, indrindra ny kalitao tokana.
Sombiny misy endrika sarotra sy takiana mazava tsara. Faharoa, ampitahaina amin'ny taham-pahombiazan'ny famokarana tokana. Famokarana tokana
Ny fizotran'ny NC ampiasaina dia tsy mitovy amin'ny famokarana betsaka amin'ny lafiny làlan'ny fitaovana, fandaminana fitaovana, ary fananganana teboka fanovana fitaovana. Ary ny famokarana batch
Raha ampitahaina amin'ny famokarana, ny famokarana tokana dia tokony hialana amin'ny fotoana fanomanana famokarana ela loatra.
Inona avy ireo karazana foibe fihodinana?
Ny foibe fihodinana dia manondro ny fampidirana shaft maromaro amin'ny lathe CNC, hany ka ny lathe dia tsy ny fiasan'ny fihodinana ihany fa ny fiasan'ny fikosoham-bary. Masinina miodina 3 axis, axis 4, axis 5.
Raha ny zoro amin'ny fihodinan'ny fandriana dia azo zaraina ho ivon'ny fanapahana fandriana sy ny ivon'ny fanapahana fandriana.
Araka ny toerana misy ny spindle dia azo zaraina ho afovoany mihodina sy afovoany mihodina foibe.
Araka ny savaivony rotary sy ny halavan'ny masinina, dia azo zaraina ho ivon-toerana mihodina sy foibe fihodinana maivana izy io.
Iza no fiarovana ankapobeny amin'ny fihodinana cnc?
Amin'ny dingan'ny fihodinana miaraka amin'ny foiben'ny fihodinan'ny CNC dia ireto manaraka ireto no entana azo antoka:
1.Rehefa mihodina amin'ny hafainganam-pandeha haingana ny spindle, dia hikororoka amin'ny tsiranoka mihodina ilay tsiranoka manapaka.
2 Fitaovana mihodina haingam-pandeha avo lenta, atahorana holavina
3. Loza mety hitranga amin'ny herinaratra vokatry ny famoahana herinaratra
4. Fahadisoana amin'ny programa, atahorana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fitaovana.
Manoloana ireo loza mety hitranga etsy ambony ireo dia takiana ny mpiasa hanaraka ny boky torolàlana momba ny fiarovana
1. Akatona ny varavarana miaro mandritra ny masinina mba hisorohana ny tsiranoka tsy hiparitaka
2. Rehefa mampiasa chuck azo itokisana ianao dia aza hadino ny manamarina sy manidy ny chuck rehefa mametaka ilay fitaovana. Mandritra izany fotoana izany, akatony ny varavarana miaro, ary aza mijoro mifanatrika mivantana amin'ilay sangan'asa.
3. Fampiasana herinaratra soa aman-tsara sy fametahana tany. Amboary ny fitaovana tsy misy herinaratra.
4 zahao ny fomba fiasa mba hahazoana antoka fa marina izany alohan'ny fikarakarana.
Inona avy ireo vokatra vita amin'ny milina familiana sy milina famadihana?
- Ny vokatra dia vita amin'ny fikosoham-bary
Sombin'ny boaty, faritra amboniny sarotra
Toy ny karazana impeller, kodiarana fitarihan'ny rivotra, velaran-tany, karazan-tany rehetra mamorona bobongolo, propeller ary propeller fiara anaty rano, ary endrika hafa amin'ny endrika malalaka, ny faritra toy izany dia azo zahana amin'ny foibe famolavolana. Impeller tsy mitongilana, bobongolo tsindrona, bobongolo vita amin'ny fingotra, bobongolo mamorona bobongolo, bobongolo vita amin'ny vata fampangatsiahana, bobongolo fanerena faneriterena, bobongolo tena marina
- Ny vokatra dia vita amin'ny milina fanodinana
Ny lathe CNC dia afaka manodina vokatra maro, sarotra ny manisy lisitra tsirairay. Raha fintinina, ny lathe CNC dia manodina ny ampahany mihodina, toy ny hazo, tanany, kapila, sns.
Masinina CNC inona no ampiasaina hanodina ny faritra?
Ny fihodinana dia karazana maodin-milina izay mihodinkodina ny sangan'asa ary ny motera no mitondra ny mpitazona ny fitaovana ary mitondra ny sakafon'ny fitaovana. Misy karazana latina maro izay afaka manatanteraka an'io karazana milina io:
Masinina latina marindrano CNC, milina latina mitsangana CNC, milina mihodina CNC.
Karazan'asa inona no mifanaraka amin'ny fanodinana CNC lathe?
1. Ny faritra mihodina amin'ny tendrontany sarotra na sarotra ny mifehy ny habeny
Satria ny ivon-toerana mihodina amin'ny CNC dia manana lahasa fampidirana an-tsokosoko sy boribory, ary ny ivon'ny fihodinan'ny CNC dia misy fiasan-tsolika tsy boribory.
Miaraka amin'ny fiasan'ny interpolation curve dia afaka mamadika ireo faritra mihodina izy ireo, izay misy ny contour curve an'ny planina, ao anatin'izany ireo ampahany amin'ny alàlan'ny fikajiana mety.
2. Fizarana avo lenta
Ny fepetra takiana amin'ny ampahany dia manondro ny fitakiana ny haben'ny, ny bika, ny toerany ary ny haavony, izay anisany indrindra ny mari-pahaizana momba ny faritra.
fahamendrehana ambonimbony. Ohatra, ny refy marina amin'ny refy dia avo, faritra misy varingarina misy fitakiana varingarina avo;
Sombin'ny kônôma miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fahamendrehana, ny boribory ary ny fironana amin'ny tsipika; faritra misy fepetra takiana avo lenta ho an'ny mombamomba ny tsipika (endrika mihaja tsara)
Ao amin'ny lathe CNC mazava tsara manokana, ny mari-pahaizana momba ny endriny geometrika dia azo ampiasaina ho avo dia avo koa.
3. Fanodinana workpiece mihamafy
Amin'ny fanodinana bobongolo lehibe dia maro ny faritra misy habe sy endrika be pitsiny. Ny fanovana ireo faritra ireo aorian'ny fitsaboana hafanana dia kely.
Sarotra ny mikosoka ireo faritra nohamafisina noho ny habeny,
Soloy ny fitotoana fikosehana amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana.
4.Fanamboarana sombin-javatra miaraka amin'ny dingana sarotra
Ny workpiece dia mila manodina ny boribory ivelany, ny tarehy farany, ny fikosoham-bary amin'ny sisiny, ny fandavahana. Ity karazan'asa ity amin'ny ankapobeny dia mila fitaovana milina telo ho an'ny fanodinana, ny lathes, ny milina fanodinana, ny milina fandavahana, ny famoahana ary ny famoahana entana dia manahirana tokoa, azonao atao ny mividy ivon-toerana fanodinana.
Ny faritra mihodina amin'ny CNC
Ny fitaovana ampiasaina hitazonana ny sangan'asa amin'ny lathe dia antsoina hoe fiovana lathe.
Ny latte fiakarana dia azo zaraina amin'ny fikarakarana ankapobeny sy sokajy manokana sokajy roa.
Ny lalao iraisan'ny rehetra dia manondro ny fiasa mitovy amin'ny fametahana karazan'asa roa na mihoatra ny roa, ohatra, ny valanoranon'ny valanoranony telo, ny valanoranon'ny valanoranony efatra, ny clamp amin'ny lohataona ary ny mandrelà manerantany amin'ny lathe.
Ny fiasa manokana dia fitaovana namboarina manokana hanodinana ny sanganasa voafaritra mazava amin'ny fizotrany iray.
Raha mizara arakaraka ny toetoetran'ny fitambaran'ireo singa fampitaovana dia misy ny fitaovana tsy azo averina atambatra sy fiomanana azo averina atambatra, ity farany dia antsoina hoe «modular».
Ny lalao miaraka amin'ny kalitao azo itokisana dia afaka miantoka ny kalitaon'ny vokatra, manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana ary manitatra ny faran'ny fampiasana fitaovan'ny milina.
Amin'ny asa lathe, ny ankamaroan'ny fampiasana ny workpiece na ny toeran'ny cylindrical banga.
Ny valanoranon'ny valanoranony telo, mizara ho manual, electrique, pneumatic, hydraulic telo, arakaraka ny filan'ny mpanjifa samy hafa dia azonao atao ny misafidy. Mivadika afovoany amin'ny chuck hydraulic ankapobeny ampiasaina bebe kokoa, ny avo lenta ny automatisation. Mety amin'ny fanodinana batch.
Raha ampitahaina amin'ny lathes mahazatra, ny lathes CNC amin'ny ankapobeny dia mampiasa tilikambo fitaovana CNC, mizara ho rafitra mijidina sy marindrano. Misy gara 4, gara 8 ary gara miisa 12 hisafidianana. Arakaraka ny hamaron'ny gara, ny vidin'ny avo kokoa. Ny karazana fiara samihafa dia azo zaraina ho tilikambo hydraulic sy tilikambo elektrika. Amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny tilikambo antsy an-herinaratra dia somary mora vidy kokoa. Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny programa amin'ny rafitra CNC, ny fantsom-pamokarana rafitra CNC ho an'ny tilikambo fanapahana, fanovana fitaovana mandeha ho azy. Fahombiazana avo lenta.
Ny rambony sy ny chuck dia miara-miasa mba hanamboarana ilay sangan'asa. Ny seza rambo dia manana seza rambony an-tanana, seza rambo hydraulic, seza rambony pneumatika.
Firaisana azo alaina,
Masinina fanesorana sifotra: Rehefa voahodina ny foibe fihodinana dia hokapaina ny fako, izay mora manangona mandritra ny fotoana maharitra. Ny milina fanesorana puce dia azo ampiasaina amin'ny fanesorana puce. Ny vy an-tsokosoko dia hoentina any amin'ny fiara ivelany amin'ny alàlan'ny rojom-bidy ho an'ny fitsaboana mitambatra.